Khabiirka Ciyaaraha Ee Mark Lawrenson Oo Saadaaliyey Kulanka
Finalkii 139aad ee FA Cup ayaa Sabtida ay nasiib u yeesheen inay ku kulmaan laba kooxood oo reer London ah, waxaana diiwaanka la gelin doonaa Arsenal ama Chelsea oo midkood ay koobka ugu dhex dabbaal-degi doonto garoonka qaranka ee Wembley.
Inkasta oo isbeddel lagu sameeyey qaabkii dabbaal-degga iyo sharcigii hore ee caddaynayay qaabka ay kooxda koobka ku guuleysataa u hanan doonto koobka, isla markaana kaliya gacanta looga dhiibi doono koobka kooxda guuleysata, kaddibna lagu kala dareeri doono garoonka xaflad la’aan, haddana waxay ciyaartani tahay mid xamaasaddeeda leh oo ay magac iyo maalba ku helayso kooxda guuleysata.
Khabiirka ciyaaraha Mark Lawrenson oo ka hawl-gala BBC Sports oo saadaaliya kulamada Premier League, FA Cup iyo League Cup ayaa soo saaray saadaashiisa kulankan, waxaanu labada kooxood ee reer London ka nixiyey mid ka mid ah.
Mark Lawrenson waxa saadaasha kulanka finalka FA Cup kala qayb-galay Josh Franceschi oo Arsenal taageere u ah iyo Willie J Healey oo Chelsea taageera.
Josh Franceschi oo ah hormoodka barnaamijka You Me at Six oo dhamaadka sannadkan soo bixi doona, waxa uu inta badan daawadaa kulamada Arsenal, halka uu abwaanka heesaha qora ee Willie J Healey uu isaguna nafta dul dhigo Chelsea.
Labadan taageere ee labada kooxood, waxa uu mid walba guusha u saadaaliyey kooxdiisa, laakiin waxa layaab leh in labadooduba ay isku natiijo sheegeen.
Josh Franceschi waxa uu saadaaliyey in Arsenal ay ku badin doonto 3-1, guusha koobkana ay garoonka Wembley oo cidlo ah ugu dabbaal-degi doonto, halka Willie J Healey uu isaguna saadaaliyey in 3-1 ay Chelsea ku badin doonto oo ay koobka ku guuleysan doonto.
Marka laga yimaaddo labadan taageere, Mark Lawrenson ayaa isaguna saadaal dhinaca goolasha kaga duwan soo saaray, laakiin mid ka mid ah labada kooxood ka farxiyey.
Mark Lawrenson waxa uu saadaaliyey in Arsenal ay 1-0 ku badin doonto, isla markaana ay koobka hanan doonto, halka Chelsea ay niyad jab kaga bixi doonto garoonka.
Haddaba, akhriste, adiguna saadaali kulanka finalka FA Cup ee Arsenal iyo Chelsea, fikirkaagana ku qor halka hoose ee falanqeynta akhristeyaasha loogu talogalay.